အော်စကာ ၂၀၂၁ - ကြယ်တို့၏ညတွင် musanews ၃
ဒိုမီနီကာ၊ Settembre 19၊ ၂၀၂၁
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ အော်စကာ ၂၀၂၁: စွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင် ၃ ခု
27ပြီလ 2021, XNUMX
ဒီလိုဖြစ်လင့်ကစားနောက်ဆုံးမှာသူတို့ပျော်ရွှင်စွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် Los Angeles မြို့ gli အော်စကာ ၂၀၁၅, ပြည်ပမှကြယ်ပွင့်အစစ်အမှန်ကသူတို့အမှတ်တရဖြစ်စေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့မတ်မတ်နှင့်အတူအရာအားလုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်မှာ။
ဒါပေမယ့်မင်းသားတွေ၊ ဒါရိုက်တာတွေ၊ ပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆည်းကပ်မှုအကြောင်းပြောရရင်လည်းသူတို့တွေပါ အဝတ်အစား သူတို့ဝတ်ဆင် 2021 အော်စကာ၏အနီရောင်ကော်ဇော.
စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များ၊ ကျော်ကြားမှုများသော ၀ တ်စုံများ၊ ကြည့်ရှုသူ၏အကြည့်ကိုအလင်းရောင်ပေးနိုင်သောမှော်အ ၀ တ်အစားများ။
ဒီတော့ ၉၃ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေစဉ်ကအနီရောင်ကော်ဇောကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့စွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်သုံးခုကိုကြည့်ရအောင်။
Chanel အတွက် Margot ရော်ဘီ
Margot ရော်ဘီ ဒါဟာဆက်ဆက်တစ်ခု indelible အမှတ်အသားကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
actစတြေးလျမင်းသမီး၏အသွင်အပြင်ကိုသဘာဝအတိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် Chanel, 31 Rue Cambon of Maison သည်မင်းသမီး၏အများပြည်သူနှင့်လူမှုရေးပွဲများတွင် ၀ တ်ဆင်သောဝတ်စုံများကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကမှတ်သားထားခဲ့သည်။
ထိုအခါသမယတွင် Chanel သည်အထူးညနေခင်းဝတ်စုံကိုစဉ်းစားခဲ့သည်။ Margot သည်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုရွေးချယ်သည် ပန်းမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း သတ္တုဇာများ၊ ပါးလွှာသောကြိုးနှင့်အဆင်တန်ဆာရတနာခလုတ်သုံးခုပါရှိသည်။
ရိုးရိုးနှင့်ယဉ်ကျေးသောсилуэтနှင့်အနည်းငယ်ရည်းစားလည်ပင်းပါသောရှည်လျားပြီးတပ်ဆင်ထားသည့်အ ၀ တ်အစား။
အဆိုပါဝတ်စားဆင်ယင်အလုပ် 205 နာရီယူခဲ့ပါတယ်။
Chanel atelier များအားတီထွင်ခြင်း၊ ခန္တာကိုယ်နှင့်တည့်တည့်မှအရောင်တောက်ပခြင်း၊ ရှေ့တွင်၊ လည်ပင်း၌လည်ပင်း၌ဖိထားသည့်ခလုတ်များနှင့်အလှဆင်ထားသောဂရုပြုမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လုံးဝဖုံးလွှမ်းထားသည်
နောက်ဆုံးတွင် Margot Robbie သည် Chanel အနက်ရောင် clutch ဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်။
Giorgio Armani Privéတွင် Amanda Seyfried
သင်သိသည်၊ အနီရောင်ကော်ဇောတွင်အနီရောင် ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသည်သေချာသောအသံဖြစ်ရုံသာဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အနီရောင်စားဆင်ယင် အားကစား Amanda Seyfried.
Elegant and seductive ၀ တ်စုံကိုလက်မှတ်ထိုးသည် Armani Prive, ဒီဇိုင်နာကဒီဇိုင်းတစ် ဦး စားဆင်ယင် Giorgio လူပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်၎င်းသည်ဟီစစ္စကတ်ပန်းများကိုဖော်ပြသည့်ပခုံး pad များမရှိခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်နွေရာသီညတစ်နာရီသာကြာသောပြင်းထန်သောအနီရောင်မှတ်စုများနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
အ ၀ တ်အထည်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ပြီးအမန်ဒါဆိုင်းဖရစ်၏curတ္ပုံသဏ္enhanceာန်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အဆင်တန်ဆာပန်းပွင့်၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရရန်ရွေးချယ်ထားသည်။
ပုံသဏ္inာန်ရှိပန်းပုရုပ်ဖြစ်သော်လည်းအလွန်ပေါ့ပါးသောကြောင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုသည်လှပသောအသွင်အပြင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Stylist Elizabeth Stewart ဦး ဆောင်သောစံနမူနာမပြနိုင်သောရွေးချယ်မှု။ ရွှေ statuette မပါဘဲကျန်ရှိနေသော်လည်းအော်စကာကြည့်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်အနိုင်ရခဲ့သည်။
Valentino Haute Couture ရှိ Zendaya
အလှအပ၏တနျခိုး။ တစ် ဦး Ethereal ၏မျက်မှောက်မှာအလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်သောအတွေး Zendaya အားဖြင့်တစ် ဦး ဖန်တီးမှုအတွက်အနီရောင်ကော်ဇောလမ်းလျှောက် Valentino.
ရောမ maison မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော hybrid ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် mermaid motif ၏ sinuosity သည်ထည်၏အလင်းရောင်နှင့်အတူဖြတ်တောက်ထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပခုံး pads များနှင့်ရည်းစားလည်ပင်းမရှိခြင်းကိုရောစပ်ပေးသည်။
နာရီ ၃၀၀ ကျော်အလုပ်လုပ်သောဤဝတ်စုံသည်အခြားထူးခြားသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး အားအထပ်ထပ်အထပ်ထပ်ဖုံးကွယ်ထားသည်။
Pierpaolo Piccioli အားဖြင့်အမည်ပြောင် အတင်းလှတယ်, အမျိုးစုံရနှင့် chameleonic စတိုင်တစ်ခု couture evocation ဖြစ်ပါတယ် ချာ skimpy ဆင်မြန်းခြင်းဖြင့်ပေးသောခုနစ်ဆယ်၏, မကြာခဏ sequins နှင့်တွေဆီကနေအောက်မှာဖြတ်တောက်မှုနှင့်ဖုံးလွှမ်း။
ယခင်ဆောင်းပါးgluten-free pasta များ၊ အကယ်၍ သင်ကကလေးများကိုပေးလျှင်သတိထားပါ၊
နောက်ဆောင်းပါးJustin Bieber တွင်အိပ်မက်ဆိုးများထပ်မံတွေ့ရသည်
ကျွန်တော့်နာမည်က Giulia Marzocca ပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်အားထက်သန်မှုကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီး၊ ငါဖက်ရှင်, ၎င်း၏သမိုင်းနှင့်၎င်း၏အားလုံးရှုထောငျ့ကိုချစ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြရန်လူနေမှုနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊ ရဲရင့်မှုနှင့်အနုပညာပုံစံတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကိုယ့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပန်းတိုင်ထားတယ်၊ သူတို့ကိုစိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေပေးတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု - ဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုရှာမလဲ
နိုဝင်ဘာ 16, 2017